Egwurugwu Arch guzoro
Akwa ọkọlọtọ Arch bụ ihe na-adọrọ adọrọ nke ukwuu na ihe omume mmemme maka ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí. Enwere ike iji ya naanị ya ma ọ bụ ọkọlọtọ abụọ ọnụ dị ka ọnụ ụlọ, dị na nha atọ. Ihe ruru ọkọlọtọ osimiri pcs 8 nwere ike ịkekọrịta otu ntọala dịka nhọrọ.
Ngwa: Mgbasa ozi ime ụlọ & n'èzí, mmemme, ihe ngosi, ihe ngosi, ihe omume, nkwalite, agbamakwụkwọ, nnọkọ, ụlọ ahịa na ụlọ ahịa, ahịa, ihe ngosi akpaaka wdg.
Enwere ike iji arch Rainbow n'otu n'otu, rụọ ọrụ dị ka onyinyo maka nkwalite ụgbọ ala ma ọ bụ ọnụ ụzọ nnabata maka ụlọ ahịa.
Ọ bụrụ na ị na-eji arches ihe omume abụọ na-agafe ọnụ, ụda egwurugwu nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ụlọikwuu na ihe omume n'èzí, ma ọ bụ mepụta mpaghara mkparịta ụka azụmahịa na ihe ngosi ahia.
Enwere ike itinye ọkọlọtọ ndị ọzọ na ntọala igwe nke Rainbow arch, mee ka ọnụ ụzọ ámá gị mara mma ma gosipụta ozi mgbasa ozi karịa site n'echiche dị iche iche.
Nnukwu ihe ngosi n'otu akụkụ ma ọ bụ akụkụ abụọ. Eserese ákwà na-agbanwe agbanwe na-enyere gị aka iweghachi ma ọ bụ mepụta ozi ọhụrụ n'ụzọ dị mfe maka mmemme ọzọ.
Nhọrọ nha 3, obosara 3m, obosara 4m na obosara 5m. Udi elu ọkọlọtọ arch nwere ike ịdị warara ma obosara site n'ịgbanwe ogwe nkwado elu.
Carbon composite frame pole, akụkụ nke ọ bụla n'ogologo 1.15m ma jikọọ ya site na eriri na-agbanwe agbanwe nke nwere ike izere ịla n'iyi ma mee ka ọ dị mfe maka ntinye, Nke a dị arọ, ọkpụkpụ na-agbanwe agbanwe nwere ike ikpokọta ngwa ngwa na nkeji na-enweghị ngwá ọrụ ma ọ bụ ubube.
Ụdị ntọala 2 dị, ntọala metal adịchaghị ma ọ bụ isi ihe, dabere na mmefu ego gị na ebe ngwa. Enwere ike ịgbakwunye akpa mmiri dị arọ maka nkwụsi ike ka mma.
The premium metal base arọ 13kg, ma e wezụga mmezi beaflag arụnyere, anyị nwere ihe ọhụrụ ere ihe: wheel na otu nsọtụ na adịgide oghere na nsọtụ ọzọ; Enwere ike ikpokọta ogwe osisi / metal base / akpa mmiri / ọkọlọtọ e biri ebi n'ime akpa ebu nke na-abịa na ntọala ígwè, naanị njide na wiil n'èzí, na-arụ ọrụ dị ka uwe uwe, dị mfe ma dị mfe ibufe.
Ekwuru: Ọ bụrụ na ị na-eji Arch banner n'èzí, a na-atụ aro ka ejiri ya na ikuku na-erughị ọkwa 5
(1) Obere nkwakọ ngwaahịa mana nnukwu ngosipụta, ogologo njem naanị 1.15m
(2) A na-ejikọta okporo osisi site na eriri na-agbanwe agbanwe, dị mfe ịgbakọta
(3) Ọ dị mfe ịtọlite ​​​​na enweghị akụrụngwa mgbakwunye achọrọ.
(4) Isi ihe dị iche iche na akpa mmiri gbakwunyere dị
(5) Ọkọlọtọ nwere ike ịkekọrịta otu ntọala ahụ iji mee ka ụlọ ntu gị bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ
(6) Na-abịa na akpa ebu, ntọala ígwè nwere wiil, maka njem na nchekwa dị mfe
Koodu ihe Nha Ngosipụta akụkụ Nkwakọ ngwaahịa
ỤTA-3 S 3.0*2.5m 1.2m
ỤTA-4 M 4.0*2.9m 1.2m
ỤTA-5 L 5.5*3.3m 1.2m
Nke gara aga: ọkọlọtọ isi ụlọ ntu
Osote: Bali ọkọlọtọ
ọkọlọtọ Base Magnetik
Ọkọlọtọ n'ikpere mmiri